Maxay ka dhignayd saddexleeydii uu xalay saxiixay Weeraryahanka Manchester City ee Sergio Aguero? – Gool FM
(Manchester) 13 Jan 2020. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta Manchester City ee Sergio Aguero ayaa xalay saxiixay saddexleey, waxaana uu sidaas ku jabiyey rikoorro waa wayn.
Xiddiga xulka qaranka Argentina ayaa goolka hore la yimid daqiiqaddii 28’aad kaddib caawin uu ka helay De Bruyne, waxaana uu ciyaarta ka dhigay 3-0 oo ay Man City kaga gacan sarreysay Aston Villa, isagoo sidaas ku barbareeyey rikoorkii 175-gool oo uu haystay Henry.
Aguero ayaa markale shabaqa soo taabtay waxaana uu dhaliyey goolkiisa labaad daqiiqaddii 57-aad, waxaana uu goolkaasi noqday goolkii 176-aad ee uu ka dhaliyo horyaalka Premier League oo uu ku noqday laacibka ugu goolasha badan horyaalka xiddigaha Ajaaniibta ah, isagoo sidaas ku jabiyey rikoorkaas oo uu haystay halyeyga Arsenal ee Thierry Henry.
Waxa uu Aguero dhammaystiray saddexleeydiisa kulankan daqiiqaddii 81-aad, waxaana uu sidaas ku sameeyey rikoor wayn, isagoo noqday laacibka abid ugu saddexleeyda badan Taariikhda horyaalka Premier League, waxaana uu xalay dhaliyey saddexleeydiisii 12-aad ee horyaalka.
Kooxda Real Madrid oo ku guuleysatay Spanish Supercopa kaddib markii ay garaacday Atletico Madrid... + SAWIRRO